Sachigaro weAfrican Tourism Board uye Ambassadors Iye zvino Vanotenderera kuchamhembe kweTanzania
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » African Tourism Bhodhi » Sachigaro weAfrican Tourism Board uye Ambassadors Iye zvino Vanotenderera kuchamhembe kweTanzania
African Tourism Bhodhi • Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hospitality Industry • nhau • Tanzania Breaking News • ushanyi • Kufamba Wire Nhau
African Tourism Board Sachigaro uye Ambassadors parwendo kuTanzania.
Sachigaro weAfrican Tourism Board, VaCuthbert Ncube, vaiperekedzwa nechikwata cheMamiririri eATB parwendo rwekujairira kuNorth Tanzania mushure mekumisikidza First East African Regional Tourism Expo nezuro, Muvhuro, Gumiguru 11, 2021.
Rwendo urwu rwakatanga pazasi peGomo reMeru mudunhu reArusha.
Ivo boka rakazoshanya neruremekedzo kuTengeru Cultural Tourism Chirongwa iyo yakatsaurirwa kuchengetedza nharaunda paGomo reMeru.
Sachigaro weATB nevateereri vake vachashanyirawo matunhu enharaunda yeKilimanjaro pazasi peGomo reKilimanjaro panguva yekushanya kwavo kwekuziva.
The African Tourism Bhodhi (ATB) Sachigaro nechikwata chake cheAmbassadors vatanga rwendo rwavo nhasi munzvimbo dzezvikomo zveMount Meru mudunhu re Arusha nerwendo rwekuremekedza kuTengeru Cultural Tourism Chirongwa, nzvimbo yakagadzwa kuronga nekupa kushanya kwetsika.
Iyo Tengeru Cultural Tourism Chirongwa inozvipirawo kuchengetedza nharaunda kumateru eGomo reMeru, chechipiri chepamusoro soro muTanzania. Chirongwa ichi chakazvipira zvakare kukwezva vashanyi vemuno nevekunze vanofarira kushandisa mazororo avo nevanhu vemunharaunda uye vozvipira pachavo kuti vabatsire mukusimudzira zvirongwa zvakasiyana zvemagariro nezvehupfumi zvinobatsira vanhu vemuno.
Yakavakirwa pakati peMount Meru neMount Kilimanjaro, Arusha National Park ndiyo imwe nzvimbo inokwezva vashanyi, iyo yaisanganisira vatori vechikamu musangano mushure mekuungana kwavo muguta re Arusha. Iri pakati pezviviri zvinokwikwidza uye zvakatarisana nenhongonya dzakakwirira kuchamhembe kweTanzania, Arusha National Park inopa kutiza nekukurumidza kune vanhu vari kutsvaga kuzorora pakupera kwesvondo, kazhinji vanobva kumaguta akabatikana senge Arusha neMoshi kuNorth Tanzania.
Paki iyi inonyanya kutongwa neMount Meru, iri pamamita 4,566 (14,980 tsoka), ndiro gomo rechipiri rakakwirira muTanzania. Iyo paki yakatarisana nemapani ekumadokero kweKilimanjaro pamawere eGomo reMeru inopa mafambiro ekufambisa safari kunyanya kune vashanyi vanobva kuTanzania, East Africa, uye nedzimwe nzvimbo dzepasi. Inonyanyo kuzivikanwa yemakungwa manomwe, iyo Momella madhamu mukati memiganhu yayo, uye nhamba yayo hombe yenyati dzekare kudarika kana mamwe mapaki muTanzania.
Chakafukidzwa muzuva rakawanda rezuva, Gomo reKilimanjaro, gomo refu pakureba muAfrica, rakasiyana nemamwe Tanzania yevashanyi yekuenda kunzvimbo yekuenda, kukwezva vanenge 60,000 XNUMX vanokwira gore rega rega. Gomo rinomiririra mufananidzo wepasi rose we Africa, uye yayo yakareba, yakafukidzwa nechando-yakaenzana macone cone yakafanana ne Africa.
Pakati penyika, iro dambudziko rekudzidza nezve, kuongorora, uye kukwira gomo risinganzwisisike rakabata fungidziro dzevanhu pasi rese. Kusvika nhasi, Gomo reKilimanjaro rave mucherechedzo wezviitiko zvakasiyana zvemunyika uye zvepasi rese, bhizinesi, uye kunyangwe zvematongerwo enyika. Makambani emabhizimusi uye akasiyana emakirabhu emakirabhu ane zvinyorwa zvavo zvine zita reMount Kilimanjaro kuratidza hupenyu hwavo hukuru.
Muna 1961, mureza weTanzania yakanga ichangobva kuzvimirira yakatakurwa kukwira mugomo kuti iturikwe kumusoro, uye tochi yerusununguko yakabatidzwa pamusoro pekusimudzira mushandirapamwe wezvematongerwo enyika wekubatana, rusununguko, nehukama.
Gomo Kilimanjaro rinoramba riri mucherechedzo uye kudada kweAfrica nehukuru hwayo hwekushanya. Iri gomo rakakwirira kwazvo muAfrica rakanyorwa pakati penzvimbo makumi maviri neshanu dzevashanyi munyika kuitira kunakidzwa kweupenyu hwese.